ဆိုးလ်ရှားနေရာကို ဘယ်သူ အစားဝင်နိုင်မလဲ? | FOX Sports Myanmar
ဆိုးလ်ရှားနေရာကို ဘယ်သူ အစားဝင်နိုင်မလဲ?
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယာယီနည်းပြအဖြစ်နဲ့ ၁၉ ပွဲကိုင်တွယ်ခဲ့ရာမှာ ၁၄ပွဲအထိ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဆိုးလ်ရှားက အမြဲတမ်းနည်းပြအဖြစ်နဲ့ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုလက်ထက်မှာ ကျဆင်းခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေကို ဆိုးလ်ရှားက သူ့လက်ထက်မှာ အကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်လာအောင်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုတော့ ဆိုးလ်ရှားဟာ နောက်ဆုံး ၁၇ ပွဲမှာ ၄ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ရလဒ်တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းကလည်း တန်းဆင်းဇုန်နဲ့ ၂ မှတ်သာကွာဟတော့ပြီး ဆိုးလ်ရှားအတွက်ဖိအားတွေ အကြီးအကျယ်ကျရောက်နေပါပြီ။ သူ့နေရာကို အစားထိုးဖို့ နည်းပြလောင်းတွေလည်း ဆက်တိုက်ထွက်လာခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်နဲ့ ပွဲမှာသာ ထပ်ရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ကံကြမ္မာက ပြောင်းလဲလာတော့မှာပါ။ သူ့နေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ နည်းပြတွေကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်..။
The Future is Now: Wolfsburg introduces 5G augmented reality coverage
မော်ရင်ဟိုကို ထုတ်ပယ်တော့မယ့်အချိန်မှာ လော့ရင်ဘလန့်က နည်းပြသစ်ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်းက လက်ရှိမှာတော့ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် နည်းပြက ဖာဂူဆန်လက်အောက်မှာ ၂ရာသီကြာကစားခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအတွက် ဖလား ၁၁လုံးအထိ ဘလန့်က ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဥရောပအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့လို့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အနေအထားတွေကို ဘလန့်က ပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ အထူးသဖြင့် ရေတိုကာလအတွက် သင့်တော်တဲ့နည်းပြမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာ ဂျူဗီကို စီးရီးအေဖလား ၅ လုံးဆက်တိုက် ရယူပေးခဲ့ပြီးနောက် အယ်လီဂရီက အသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်။ အသက်၅၂ နှစ်အရွယ်နည်းပြက ဂျူဗီကို ဆုဖလား ၁၁လုံးအထိ ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပေမယ့် သူလည်း ဥရောပအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့လို့ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရတာပါ။ ၀ါရင့်နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အယ်လီဂရီက ယူနိုက်တက်လိုအသင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသူပါ။ သူ့လက်ထက်မှာ ပေါ့ဂ်ဘာကို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားဖြစ်လာအောင် ပုံစံပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိယူနိုက်တက်မှာလည်း ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့ ပြန်လက်တွဲရနိုင်တာမို့ မျှော်လင့်ချင်စရာပါပဲ။ အယ်လီဂရီက ဂျူဗီကို ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအထိ ပို့ဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်လိုအပ်နေတဲ့ နည်းပြရာထူးအတွက်လည်း ရေပန်းအစားဆုံးအဆင့်မှာ ထိပ်ပိုင်းနားက ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ပိုချက်တီနိုက ယူနိုက်တက်အလိုအရှိဆုံးနည်းပြပါ။ မော်ရင်ဟိုကို ထုတ်ပယ်ပြီးနောက်မှာလည်း ပိုချက်တီနိုကို ခန့်အပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကလည်း စပါးကို အင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အာဂျင်တိုင်းသားကို နည်းပြအဖြစ် မြင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒက ရှိနေပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ စပါးကလည်း အခက်တွေ့မှုတွေရှိနေခဲ့ပြီး ပိုချက်တီနိုရဲ့ လန်ဒန်ကလပ်အနာဂတ်က လှုပ်ခတ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ပိုချက်တီနိုသာ စပါးနဲ့လမ်းခွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် ယူနိုက်တက်က နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ လက်သွက်ခြေသွက်နဲ့ လှုပ်ရှားမှာ အသေအချာပါပဲ။ လူငယ်ကစားသမားတွေကို တိုးတက်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သလို ဖျော်ဖြေမှုရှိတဲ့ ကစားဟန်ကိုလည်း ပုံဖော်နိုင်တဲ့ နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်တာမို့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်အသစ်အဖြစ် ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးနည်းပြတစ်ဦးအဖြစ် ပိုချက်တီနိုက ရှိနေပါတယ်။
ယူနိုကျတကျရဲ့ ယာယီနညျးပွအဖွဈနဲ့ ၁၉ ပှဲကိုငျတှယျခဲ့ရာမှာ ၁၄ပှဲအထိ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီးနောကျ ဆိုးလျရှားက အမွဲတမျးနညျးပွအဖွဈနဲ့ ခနျ့အပျခံခဲ့ရပါတယျ။ မျောရငျဟိုလကျထကျမှာ ကဆြငျးခဲ့တဲ့ရလဒျတှကေို ဆိုးလျရှားက သူ့လကျထကျမှာ အကောငျးဆုံးပွနျဖွဈလာအောငျတညျဆောကျပေးနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး အခုတော့ ဆိုးလျရှားဟာ နောကျဆုံး ၁၇ ပှဲမှာ ၄ပှဲသာ အနိုငျရခဲ့ပွီး ရလဒျတှပွေောငျးပွနျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အသငျးကလညျး တနျးဆငျးဇုနျနဲ့ ၂ မှတျသာကှာဟတော့ပွီး ဆိုးလျရှားအတှကျဖိအားတှေ အကွီးအကယျြကရြောကျနပေါပွီ။ သူ့နရောကို အစားထိုးဖို့ နညျးပွလောငျးတှလေညျး ဆကျတိုကျထှကျလာခဲ့ပွီး လီဗာပူးလျနဲ့ ပှဲမှာသာ ထပျရှုံးခဲ့မယျဆိုရငျ ဆိုးလျရှားရဲ့ ကံကွမ်မာက ပွောငျးလဲလာတော့မှာပါ။ သူ့နရောကို အစားထိုးဝငျရောကျလာနိုငျတဲ့ နညျးပွတှကေို သုံးသပျကွညျ့မယျဆိုရငျ..။
မျောရငျဟိုကို ထုတျပယျတော့မယျ့အခြိနျမှာ လော့ရငျဘလနျ့က နညျးပွသဈဖွဈလာဖို့ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈခဲ့တာပါ။ ပီအကျဈဂြီနဲ့အတူ အောငျမွငျမှုတှရေယူနိုငျခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျးက လကျရှိမှာတော့ အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနပေါတယျ။ အသကျ ၅၃ နှဈအရှယျ နညျးပွက ဖာဂူဆနျလကျအောကျမှာ ၂ရာသီကွာကစားခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပီအကျဈဂြီအတှကျ ဖလား ၁၁လုံးအထိ ဘလနျ့က ရယူပေးနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ဥရောပအောငျမွငျမှုမရရှိခဲ့လို့ ထုတျပယျခံခဲ့ရပါတယျ။ လကျရှိ ယူနိုကျတကျရဲ့ အနအေထားတှကေို ဘလနျ့က ပွုပွငျပေးနိုငျစှမျးရှိပွီးတော့ အထူးသဖွငျ့ ရတေိုကာလအတှကျ သငျ့တျောတဲ့နညျးပွမြိုးလညျးဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီမှာ ဂြူဗီကို စီးရီးအဖေလား ၅ လုံးဆကျတိုကျ ရယူပေးခဲ့ပွီးနောကျ အယျလီဂရီက အသငျးနဲ့လမျးခှဲခဲ့ရပါတယျ။ အသကျ၅၂ နှဈအရှယျနညျးပွက ဂြူဗီကို ဆုဖလား ၁၁လုံးအထိ ရရှိအောငျစှမျးဆောငျပေးခဲ့ပမေယျ့ သူလညျး ဥရောပအောငျမွငျမှုမရရှိခဲ့လို့ အသငျးနဲ့
လမျးခှဲခဲ့ရတာပါ။ ၀ါရငျ့နညျးပွတဈဦးဖွဈတဲ့ အယျလီဂရီက ယူနိုကျတကျလိုအသငျးကို ကိုငျတှယျနိုငျမယျ့ အရညျအသှေးပွညျ့ဝသူပါ။ သူ့လကျထကျမှာ ပေါ့ဂျဘာကို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားဖွဈလာအောငျ ပုံစံပွောငျးလဲပေးနိုငျခဲ့ပွီး လကျရှိယူနိုကျတကျမှာလညျး ပေါ့ဂျဘာနဲ့ ပွနျလကျတှဲရနိုငျတာမို့ မြှျောလငျ့ခငျြစရာပါပဲ။ အယျလီဂရီက ဂြူဗီကို ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲအထိ ပို့ဆောငျပေးထားနိုငျခဲ့သူဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျလိုအပျနတေဲ့ နညျးပွရာထူးအတှကျလညျး ရပေနျးအစားဆုံးအဆငျ့မှာ ထိပျပိုငျးနားက ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
ပိုခကျြတီနိုက ယူနိုကျတကျအလိုအရှိဆုံးနညျးပွပါ။ မျောရငျဟိုကို ထုတျပယျပွီးနောကျမှာလညျး ပိုခကျြတီနိုကို ခနျ့အပျဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ဖူးပါတယျ။ ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေလညျး စပါးကို အငျအားကွီးအသငျးတဈသငျးဖွဈလာအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တဲ့ အာဂငျြတိုငျးသားကို နညျးပွအဖွဈ မွငျခငျြတဲ့ ဆန်ဒက ရှိနပေါတယျ။ ဒီရာသီမှာ စပါးကလညျး အခကျတှမှေု့တှရှေိနခေဲ့ပွီး ပိုခကျြတီနိုရဲ့ လနျဒနျကလပျအနာဂတျက လှုပျခတျနပေါတယျ။ တကယျလို့ ပိုခကျြတီနိုသာ စပါးနဲ့လမျးခှဲခဲ့မယျဆိုရငျ ယူနိုကျတကျက နညျးပွသဈအဖွဈ ခနျ့အပျဖို့ လကျသှကျခွသှေကျနဲ့ လှုပျရှားမှာ အသအေခြာပါပဲ။ လူငယျကစားသမားတှကေို တိုးတကျလာအောငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျသလို ဖြျောဖွမှေုရှိတဲ့ ကစားဟနျကိုလညျး ပုံဖျောနိုငျတဲ့ နညျးပွတဈဦးဖွဈတာမို့ အိုးထရကျဖို့ဒျရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျအသဈအဖွဈ ဖွဈနိုငျခအြေရှိဆုံးနညျးပွတဈဦးအဖွဈ ပိုခကျြတီနိုက ရှိနပေါတယျ။
Home Football Premier League ဆိုးလ်ရှားနေရာကို ဘယ်သူ အစားဝင်နိုင်မလဲ?